ဤ CarPlay သည် Volkswagen တွင်အလုပ်လုပ်သည် ငါက Mac ကပါ
သင်တစ် ဦး ပန်ကာဖြစ်လျှင် Apple သင်ကားသစ်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေသည်၊ သူတို့ယူဆောင်လာသည့်အတွက် Volkswagen ကိုကြည့်ပါ carplay ၏နာမအောက်မှာ App ချိတ်ဆက်ပါ € 190 ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ။ ဒီစနစ်ကအန်းဒရွိုက်ဖုန်းတစ်လုံးကိုချိတ်ဆက်ခွင့်ပေးပေမယ့်ဒီမှာပါ အသုံးချ ၎င်းသည်မည်သို့ပြုမူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောမည် iPhone ကို သို့မဟုတ် အိုင်ပက်.
သင်ရရှိသည့်အခါစိတ်ထဲပေါ်လာသည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာ carplay အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်မိုဘိုင်းဖြင့်သင်စျေးနှုန်းကြီးမြင့်စရာမလိုဘဲကားမျက်နှာပြင်ပေါ်၌၎င်းကိုတန်ဖိုးထားရန်မလိုပါကအဘယ်ကြောင့်သင် GPS ကို GPS အတွင်းထည့်သွင်းသွားမည်နည်း။ မြေပုံ.
သင်တစ်ဦးရှိပါက iPhone ကို5ယခု မှစ၍ သင်သည် application များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည် ဖုန်းကို, ဂီတ, မြေပုံ, ပို့စ်များကို, အော်ဒီယိုစာအုပ်များ y podcasts။ ဤအရာဖြင့်သင်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အိုင်ကွန်ရှိလိမ့်မည် "အခုအသံဖြစ်နေပြီ" နှင့် Volkswagen ကနေတ ဦး တည်း။
ယာဉ်၏မျက်နှာပြင်သည်ထိလွယ်ရှလွယ်သောကြောင့်၎င်းကိုကိုင်တွယ်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိနိုင်သည်။ အိုင်ကွန်များကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးထို မှနေ၍ သင့်အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်လမ်းပေါ်ကနေသင်အာရုံမပျံ့လွင့်ချင်ဘူးဆိုရင် (ကောင်းပြီ) သငျသညျကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည် Siri ကို စတီယာရင်ပေါ်တွင်အသံထိန်းချုပ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်။
မက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ကဖတ်ပါလိမ့်မည် Siri ကို အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်သင်၏အသံဖြင့်ဖြေဆိုနိုင်ခြင်း။ နှင့်အတူ မြေပုံကျွန်ုပ်တို့သွားလိုသည့်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အခမဲ့ GPS ရှိလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည် 3G / 4G ကိုအသုံးပြုသည်မှာမှန်သည်၊ သို့သော်ယခုတည်ရှိနေသောအစီအစဉ်များနှင့်အတူကားထဲသို့ GPS ထည့်သွင်းခြင်းထက် ပို၍ စျေးသက်သာသည်။ Y ဂီတအကြောင်းပြောစရာသိပ်မရှိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းမှာရှိရင်းစွဲဂီတကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မယ် iPhone ကို o အိုင်ပက် ကားစပီကာတွေ၊ carplay.
carplay ၎င်းသည်ကားနှင့်ထပ်မံလုံခြုံမှု ရှိ၍ ၎င်းတို့၏ဖုန်းကိုခံစားနိုင်သည့်သုံးစွဲသူအတွက်ထပ်တိုးတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရင်းမြစ် Volkswagen က
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » ပစ္စည်းများ » CarPlay သည် Volkswagen တွင်အလုပ်လုပ်သည်
Apple က Force Touch ပါတဲ့ကီးဘုတ်ကိုမူပိုင်ခွင့်ပေးတယ်